မန်နေဂျာနှင့်………သူ့လူများ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်နေဂျာနှင့်………သူ့လူများ ….
Posted by fatty on Aug 2, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |2comments
တကယ်ဆိုဒီခေါင်းစဉ်လေးက ကိုပေါက် မ န္တလေး ရေးတဲ့ဒီလောက်ရလို့ဒီလောက်လုပ်မှာလား….ဆိုတဲ့အကြောင်းအ၇ာကိုဆွေးနွေးဘို့ပါ။ ……….
ကျနော်အချိန်ပေးပြီရျှာကြည့်ပါသေးတယ်။ မတွေ့သေးပါဘူး။ ကိုပေါက် က ကျေးဇူးပြုပြီး link လေးပေးရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ရှာနိုင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် comment ပြန်တင်ပေးလိုက်ရင် ဆောင်းပါးလေးကရှေ့ရောက်လာမှာပါ။ ကိုပေါက်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုမဖတ်ရသေးတော့ အကြမ်းဖျင်းခြုံငုံပြီးဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာစကားပလ္လင်ခံပါရစေအုံး ……။
အကြောင်းအရာတခုကိုတဲ့တဲဆွေးနွေးတာထက်..သူများတွေဖတ်ရင်းလဲ စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင် ဖတ်မိသူများလဲ မှတ်ရသားရအောင် ..ယေဘူယျအားဖြင့်သာရေးကြည့်ရအောင်ပါ။ ကိုပေါက်ကခေုအလုပ်မှာ ၁၅ နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ company မြဲတဲ့သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ GM level Section head level, Manager level လောက်ကိုင်တွယ်နေရပြီထင်ပါတယ်။
Manager တဦးဟာ Company ရဲ့အသက် ၊ သူရဲကောင်းပါ။သူရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ..သူ့ရဲ့ leadership ability ဟာသိပ်ကိုအရေးပါ ပါတယ်။ Manager တဦးဟာ သူ့အောက်က၀န်ထမ်းတွေရဲ့ကိစ္စအ၀၀ကို တာဝန်ယူရပါလီမ့်မယ်။ …အဓိက ကတော့ကိုယ်အောက်က၀န်ထမ်းတွေဟာ ..တကယ်ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်သူတွေရှိသလို နဲနဲလူလည်ကျပြီးချောင်ခို ဘေးထိုင် အတင်းပြော ( ကိုပေါက်ပြောသလိုဆိုရင် ဗျောက်အိုးဖေါက်နေသူများ ) လဲရှိမှာပေါ့။
ပထမဆုံးတော့ ….Manager တဦးဟာ ၀န်ထမ်းတွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်ပါ။ …….
R1 = no ability, no willingness
R2 = no ability, willingness, confidence
R3 = good ability, no willingness, insecure ( no confidence )
R4 = ability, willingness …….စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီမှာ R4 ကိုေ၇ွးပြီးအေ၇းကြီးတာဝန်ပေးရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် အများလုပ်ချင်တဲ့တာဝန်တခုကို ချောင်ခိုတတ်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုထည့်မတွက်ဘဲ တခြားတယောက်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ရင် သူဟာအလိုလိုစိတ်ဓါတ်ကျလာပါလိမ့်မယ်။ငါအပယ်ခံ့ဖြစ်နေပါပြီလားဆိုပြီး feel ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုက မန်နေဂျာတဦးဟာ divide and rule method ကိုလဲကျင့်သုံးကောင်းကျင့်သုံးရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်အောက်မှာဝန်ထမ်းများတဲ့ manager ပေါ့။ ၀န်ထမ်းတွေကိုမသိမသာအုပ်စုခွဲပေးထားပြီး သတင်းရယူတဲ့နည်းပါဘဲ။ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးညီညွတ်ရင် manager ခံရမဲ့အပေါက်ပါဘဲ။ စဉ်းစားမိကြမှာပါ။
ပြီးတော့မန်နေဂျာ တဦးဟာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်မှု need level ကိုလဲသိနေရပါမယ်။ အဲဒါမှ motivate လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
ိသွေးခွဲပြီး အုပ်ချုပ် စီမံတယ် ဆိုတာ ကတော့ မကောင်းပါဘူး။
အောက်မှာ လူများရင် လက်ထောက် ထားပြီး လက်ထောက် တာဝန်ကို ကျေအောင် အုပ်ချုပ်ခိုင်းရမှာပါ။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ သွေးခွဲ ထားတာ ဟာ Organization ရဲ့ Mission ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အမှန်ကတော့ မကောင်းပါဘူး …ဒါပေမဲ့အဲဒါဟာ management theory တခုပါ။